ङादी ग्रुप पावर र बरुण हाइड्रोपावरलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति!
ऊर्जामन्त्री भुसालसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेट!
शेयर बजार नेप्से दोहोरो अंकले बढ्यो!
म्याग्दी खोलाको प्रवद्र्धक हाइड्रो भिलेजमा एचआइडिसिएलको २० प्रतिशत लगानी!
चिलिमे जलविद्युतको नाफा १.२३ प्रतिशतले बढ्यो!
ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको वार्षिकोत्सव औपचारिकतामा सीमित!
प्रकाशित मिति : शुक्र, माघ १४, २०७८
काठमाडौं, माघ । देशका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन ५० चार्जिङ स्टेसनको काम ६० प्रतिशत पूरा भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी चार्ज गर्ने सुविधाका लागि निर्माण गरिरहेका चार्जिङ स्टेसनको आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको हो ।
विद्युतीय सवारी चार्जिङ गर्ने चार्जर राख्ने संरचना तयार भइसकेको आयोजना प्रमुख सागर ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार तयार भइरहेका संरचनामा चार्जर जडान गर्न बाँकी छ ।
‘लक्ष्यअनुसार नै चार्जिङ स्टेसन तयार गर्ने गरी ठेकेदारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘चार्जर अहिलेसम्म आइपुगेको छैन । आएपछि धमाधम जडान गरेर चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि तयार गर्छौं ।’ उनले प्राधिकरणले अघि बढाएका सबै चार्जिङ स्टेसनमा काम भइरहेको बताए ।
निर्माणाधीन चार्जिङ स्टेसन अबको ५ महिना (२०७९,असार) भित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने तालिका छ । उनले लक्ष्यअनुसार नै सबै चार्जिङ स्टेसनको का सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरे ।
यी चार्जिङ स्टेसन सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने भए पनि कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको निशेधाज्ञाको प्रभावले प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण समय लम्बिन गएको छ ।विद्युत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयको विद्युतीय सवारी पूर्वाधार निर्माण आयोजना अन्तर्गत उपत्यकासहित देशभरमा यी चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण भइरहेका हुन् ।
५० वटै चार्जिङ स्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ठेक्कासम्झौता भएको हो । हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमता (७१०० किलोवाट) को चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान हुनेछ ।
चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०÷६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिनेछ ।
३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ । ५० वटै चार्जिङ स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ । सवारी साधन चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न एसियाली विकास बैंकले ऋण लगानी गरेको छ । ५० मध्ये उपत्यकामा ७ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ । यसबाहेक पनि बागमति प्रदेशमा मात्रै १३ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम अघि बढेको छ । उपत्यका बाहिर मलेखु, बिपि राजमार्ग (सिन्धुली), हेटौंडा, भरतपुर, मुङलिन, कुरिनटार र बनेपामा चार्जिङ स्टेसन बन्दैछन् ।
यस्तै, प्रदेश–१ मा भद्रपुर, दमक, कन्काई, इटहरी र विराटनगरमा गरी ५ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुने उनले बताए । प्रदेश–२ मा वीरगन्ज, सिमारा, चन्द्रनिगाहपुर, ढल्केबर, जनकपुरधाम, बर्दिबास र राजबिराज गरी ७ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुँदैछन् ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि ६ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो प्रदेशमा नवलपुर (पूर्वि नवलपरासी), दमौली, स्याङ्जामा १÷१ वटा तथा पोखरामा ३ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सूदुर पश्चिम प्रदेशमा क्रमशः ८, १ र ३ वटा गरी १२ चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनेछन् । लुम्बिनीमा नेपालगन्ज, भालुवाङ, बुटवल (३), दाङ र बर्दघाट÷ सुनवल (२) मा चार्जिङ स्टेसनको संरचना राखिनेछ । कर्णालीको सुर्खेतमा एउटा तथा सूदुरपश्चिमको धनगढी, महेन्द्रनगर र डडेलधुरामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुँदैछ । ऊर्जा खबर
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रधानमन्त्री देउवाद्धारा औपचारिक उद्घाटन
काठमाडौँ, २ जेठ । सोमबार बिहान प्रधान 1 day ago
बुटवल पावर कम्पनीको नाफा ४८.२० प्रतिशतले घट्यो
ङादी ग्रुप पावर र बरुण हाइड्रोपावरलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति
काठमाडौं,बैशाख । ऊर्जा, जलस्रोत तथा स 1 week ago
सम्बोधनको पर्खाइमा स्थानिय
निर्वाचनको सरगर्मी र कोरोनाको डर
Email : bidhutsansar@gmail.com